apple inotora matanho ekuvhara zvakanyanya u zvitoro mushure mekuba zvakapambwa
Kuru Nhau & Ongororo Apple inotora matanho ekuvhara zvitoro zvakawanda zveU.S. mushure mekuba kupamba
Mamwe maApple Stores akapambwa nezuro husiku sezvo U.S. yakatambura kuburikidza nehumwe husiku hwekuratidzira kwechisimba kwakanangana nerufu rwaGeorge Floyd. Floyd akaurayiwa apo mupurisa weMinneapolis akaisa ibvi rake mumutsipa wemurume & apos kwemaminetsi mapfumbamwe kunyangwe hazvo aive akasungwa maoko, achienderana nezvose zvaidiwa nemapurisa, uye asisiri tyisidziro. Mahofisi mana aya akadzingwa uye mumwe akapomerwa mhosva yechitatu-degree yekuuraya.
Kuchengetedza vashandi vayo kubva kumhirizhonga, Apple yakafunga kuvhara kwenguva pfupi dzimwe nzvimbo dzayo dzezvidhina nedhaka. Zvitoro izvi zvaive zvichangovhurwa mushure mekuvharwa nekuda kwechirwere checoronavirus. Apple Stores zvakakuvara kana kubiwa zvaisanganisira nzvimbo muPortland, Philadelphia, Brooklyn, Salt Lake City, Los Angeles, Charleston, Washington, D.C., Scottsdale, neSan Francisco. Zvimwe zvezvitoro zvakakuvara zvakanyanya zvakavharwa zvisina mukare apo zvimwe zvichavhurwa neMuvhuro. Apple nhasi yati, 'Tichifunga nezvehutano nekuchengeteka kwezvikwata zvedu, takaita sarudzo yekuchengetedza zvitoro zvedu zvakawanda muUS zvakavharwa neSvondo.'
Mumwe mubatsiri weTwitter anonzi Brian Mitchell (@BrianMitchL) tweeted nezve Apple Chitoro Uptown iri muMinneapolis. Chitoro chakabvutwa, kukwirwa, kubvutwa zvakare, ndokukwirwazve. MuPortland, Chitoro cheApple kuPioneer Nzvimbo yaive nemahwindo marefu akapwanywa mativi ese. Iyi nzvimbo yakanga ichangobva kuvhurwa mazuva maviri apfuura uye zvino zvichatora nguva kugadzirisa chitoro kuti chive chakachengeteka kune vatengi. Vhidhiyo kubva kuPortland & apos; s KOIN 12 inoratidza vanhu vachimhanyira mune yambotaurwa Apple Store uye vachimhanya nemabhokisi ePhones neMacs mumaoko avo.
Izvo izvo vapambi vangangodaro vasingazive & ndezvekuti maPhones avanobira muzvitoro zvakapambwa haashande & apos; haashande. Kubva 2016, demo maPhones mune imwe Apple Store haashande kana akabviswa muchitoro ichocho. Mumamiriro ekupedzisira, aya madhimoni mayunitsi achangopindura 'Tsvaga yangu iPhone.'
Chitoro cheApple chakapambwa uye vakakwanisa kupinda mumashopu kuburikidza nechitoro cheApple. # fox10phoenix pic.twitter.com/YoUwRSbiRq
- Mario Fox10 (@ MVphotoFox10) Chivabvu 31, 2020
Kunze kwema 271 eApple Stores, zvitoro zana nemakumi mana zvakavhurwa pamasvondo mashoma apfuura. Hazvisi & apos; zvakajeka kana mhirizhonga ichanonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzasara zana negumi nenomwe. Apple & apos; s wekutengesa mukuruDeirdre O'Brien akataura kutanga kwemwedzi uno kuti 'Yedu nyowani yekudyidzana nharaunda protocol inobvumira vashoma vashanyi muchitoro panguva imwe chete kuti pangave nekunonoka kwevanofamba-mukati vatengi. Tinokurudzira, pazvinogoneka, vatengi vanotenga pamhepo kuti vatore zvekutaurirana kana kutora muchitoro. '
Apple ichaisa kuchengetedzeka pakutanga kana zvasvika kune ayo ezvitina uye emota zvitoro Kana iwe ukafunga kushanyira yakavhurika Apple Chitoro, O'Brien anoti, 'Muchitoro chese, isu & apos; isu takanangana nekuganhurira pekugara uye kupa munhu wese nzvimbo yakawanda, uye kuvandudza kutarisa kwedu kune imwechete - imwe, sevhisi yakasarudzika kuGenius Bhawa uye muchitoro chose. Tiri kutora mamwe matanho ekuwedzera munzvimbo zhinji. Kuvhara kumeso kunozodikanwa kumatimu edu ese nevatengi, uye isu tinozozvipa kune vatengi vasingazounze yavo. Kuongorora kwekupisa kuchaitiswa pamusuwo, uye kutumirwa mibvunzo yehutano ichavhenekera avo vane zviratidzo - sekukosora kana fivha - kana avo vanga vachangobva kuburitswa kune mumwe munhu akatapukirwa neCOBV ‑ 19. Muswere wese wezuva, isu & apos; tichiitisa kuchenesa kwakadzika kwakanyanya uko kunonyanya kukoshesa maficha ese, kuratidza zvigadzirwa, nenzvimbo dzinotengeswa zvakanyanya. ' Nekuda kwe COVID-19 denda, chikamu chechitatu chezvemari cheApple chaive chakatarisa glum kunyangwe kupamba kwacho kusati kwamanikidza kambani kuvhara maApple Stores mazhinji eU.S. Uye zvakare, zvitoro zvine kukuvara kwakanyanya zvichavharwa kwenguva yakati.
python dhonza data kubva kuJson faira
nyora pane pdf samsung chinyorwa 8
nexus 5 x hupenyu hwebhatiri
Yakaburitswa AT&T Motorola Razr 5G mifananidzo inoratidza kuti ichachengetedza zvishoma zvakatarwa chimiro
Iwo akanakisa Apple Penzura-yakagadziridzwa maapplication ePad Pro uye iPad 9.7 (2018)
Ndeapi maapplication anoenda pa iPhone? Pano ndipo panosvitsa iOS 14 kudhanilodha
Apple Stores inovhara zvakare, sevapambi ve iPhone vanowana yambiro yekutevera
Samsung & apos; yekumusoro-yekupedzisira Galaxy Tab S6 iri kutengeswa pane rekodhi dhisikaundi inosvika kumadhora mazana maviri
Kwayedza Zvekushandisa Zvishandiso zveKuyedza ReactJS Zvishandiso
iPhone 13 yakateedzana bhatiri kugona uye bhatiri kubuda
Musiyano uripo pakati pe iPhone 7, iPhone 7s, uye iPhone 8: zvese zvatinotarisira